Laser Die nandidy sy hanova ny Label, Adhesive Fitaovana, Retro-hisainana Transfer Film - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Laser Die nandidy sy hanova ny Label, Adhesive Fitaovana, Retro-hisainana Transfer Film
Laser Die nandidy sy mamelombelona Milina
Golden tamin'ny laser - tamin'ny laser rafitra DIE vita fanapahana SY NY marika
About Digital manova System
Ny fampandrosoana haingana ny fiaraha-monina sy ny karazana sy individuation ny ilain'ny olona velona, ny teknolojia dizitaly dia nampiely sy ny fanontam-pirinty no miova fomba foana. Hafanàm-po an pirinty Nanjary tsy azo ivalozany fironana ao amin'ny orinasa, toy ny tsy mitsaha-mitombo isa ny hazakazaka fohy raharaham-barotra, madinika namboarina raharaham-barotra, ary ny tontolo iainana-namana, vidiny fepetra famonjena.
Hafanàm-po an pirinty manintona manokana bebe kokoa ny marika sy ny fanontam-pirinty fonosana mpanamboatra haingana kokoa noho ny hafainganam-pandeha, ambony toetra, marani-tsaina sy ny automatique dingana famokarana.
Rehefa mitombo nomerika fanontam-pirinty, dia toy izany no maty tamin'ny laser fanapahana!
Ny foto-kevitra dia ny hanomezana feno mpanjifa miaraka amin'ny marika isan-karazany ny vahaolana vita. Ny Modular, avo-marika tamin'ny laser maty fampisehoana fanapahana sy nahavita vahaolana natao hihaona ny fanantenanao sy ny raharaham-barotra nivoatra zavatra ilaina, ka dia afaka manolotra vahaolana marika zava-baovao ny mpanjifa.
Inona avy ireo tombontsoa tamin'ny laser maty ny hamboatra marika?
Laser Golden ny maty tamin'ny laser-fanapahana milina dia tena mankasitraka ny marika mpamokatra rehefa afaka mamorona goavana marika isan-karazany ao tokana, haingam-pandeha, dingana mandeha ho azy tanteraka.
Rapid nanova ny fiainako
Time fahavaratra. Tsy misy ilaina ny hanaovana lasitra, fanesorana ny cumbersome lasitra fanaovana fotoana.
Nanapaka fitaovana sy ny sary dia azo ovana amin'ny fotoana rehetra. Ny Laser misy amin'ny isan-karazany ny configurations: miaraka tokana na roa heny tamin'ny laser loharanom-baovao.
Ny rafitra Galvo dia mamela ny andry eo nifindra tena haingana, rehefa tanteraka focalized amin'ny faritra miasa iray manontolo. Haingam-pandeha fanapahana hanome fahafaham-po mpanjifa 'zavatra ilaina ara-potoana.
Izao tontolo izao tamin'ny laser RF kilasy CO2 loharano. Ny kalitaon'ny voapaika foana ny tonga lafatra sy tsy miova rehefa mandeha ny fotoana amin'ny vidin'ny fikojakojana ambany dia ambany.
Fa fametrahana mazava tsara fanapahana sy ny faritra miompana antsipirihany. Io fitaovana fanapahana avo miantoka fametrahana mazava tsara fanapahana marika na dia tsy ara-dalàna miaraka amin'ny hantsana.
Modular multi-toerana toy ny fiasan'ny flexo fanontam-pirinty, laminating, UV varnishing, slitting, sy rewinder, sns
Mety miasa isan-karazany ny ara-nofo
Malamalama taratasy, Matt taratasy, baoritra, polyester, polypropylene, plastika, film, sns
Mety amin'ny karazana asa
Laser maty nanapaka na inona na inona ny endrika - feno fanapahana sy nanoroka-fanapahana (antsasaky ny fanapahana), perforating, sokitra, nanamarika, miisa, sns
Golden tamin'ny laser - Laser Die fanapahana Machine Sava lalana
Golden tamin'ny laser no orinasa voalohany any Shina mba hitondra tamin'ny laser Dié-fanapahana ny teknolojia ho any amin'ny fonosana & fametahaka marika orinasa. Ny Modular multi-toerana tamin'ny laser haingam-pandeha-fanapahana milina maty dia afaka mahasolo andianà tokan-tena nentim-paharazana toy ny milina asa maty nentim-paharazana-manapaka milina, slitting milina, laminating milina, milina fanontam-pirinty varnish flexo, punching milina, ary ny rewinder.
Ny fanapahana maty tamin'ny laser ary nahavita vahaolana afaka niara-hanatratra flexo fanontam-pirinty, laminating, fanapahana, antsasaky ny fanapahana, scribing, punching, sokitra, serial hita isa, mafana nohitsakitsahiko sy slitting . Efa namonjy ny vola lany amin'ny fitaovana maro fampiasam-bola, sy ny vola lany amin'ny asa sy ny fitehirizana ny fanontam-pirinty sy ny fonony mpanamboatra. Nampiasaina be teo amin'ny fanontam-pirinty marika, fonosana vata, karatra firarian-tsoa, orinasa horonam-peo sy ny orinasa hafa.
Golden tamin'ny laser Features - QR Code / Barcode Vision Recognition System
Manapaka hatrany, seamlessly zatra asa an-the-lalitra.
Fakan-tsary ho azy ary mitazana ny manaiky QR code / barcode.
Hanafoana ny fako ara-nofo.
Zero fotoana fametrahana ny sary miovaova, ny mpiara-miasa ny nomerika tsara indrindra mpanonta.
Web Width 350mm / 13,7 "
Maximum Web Diameter 600mm / 23.6 "
Web Speed 0 ~ 80m / min (Speed ​​miovaova toy ny hafa sary, fitaovana, thicknesses)
Laser Source nasiana tombo-kase CO2
Laser Hery 275W / 500W
Laser Cutting fametrahana mazava ± 0.1mm
Herin'aratra 380V 50Hz / 60Hz, dingana telo
Maximum Web Diameter 400mm / 15,7 "
Laser Hery 150W / 275W / 500W
Laser fametrahana mazava tsara fanapahana ± 0.1mm
Modular famolavolana, hentitra loatra ny fitsipika kokoa sy tsy voatery configurations
Standard fanahafana: Ny fanajanonana + tranonkala mpitari-dalana tamin'ny laser maty + fanapahana + fanesorana fako + tokan-tena miolikolika
More Safidy: nomerika fanontam-pirinty / mangatsiaka foil / varnish / efijery pirinty / fisaka fanapahana / mafana nohitsakitsahiko / manodidina antsy maty fanapahana / avo roa heny rivotra, mankao ...
Taratasy, baoritra, hisainana fitaovana, 3M orinasa kasety, PP, PET, polyimide, polymeric, fitaovana plastika sy ny sarimihetsika, sns
azo ampiharina Industries
Sakafo sy zava-pisotro marika, fanatsarana tarehy marika, tokantrano appliance marika, vokatra elektronika marika, hisainana etikety, fonosana fanomezana vata, elektronika singa gaskets, sns
Ny sasany etikety SAMPLE
FA asany mahagaga tamin'ny laser DIE fanapahana milina Vita!
Fampiharana Indostria sy ny Customer Case Sharing
Digital orinasa fanontam-pirinty
Haingana kokoa ny teknolojia ara-toekarena famokarana Label
E Company dia mpanamboatra ny vita pirinty marika ho 50 taona mahery tany Amerika Afovoany. Noho ny fitomboan'ny-boky kely namboarina baiko, ny vola lany amin'ny nentim-paharazana maty-hamboatra marika avo loatra hitsena ny mpanjifa ny daty fanaterana nangataka.
Tamin'ny faran'ny 2014, ny orinasa nampahafantatra ny faharoa-taranaka nomerika maty tamin'ny laser rafitra fanapahana sy ny famaranana LC-350 amin'ny Golden tamin'ny laser, amin'ny laminating sy varnishing miasa hihaona mpanjifa 'namboarina ilaina kokoa.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa lehibe indrindra lasa fototry ny famokarana sy ny fonosana vita pirinty marika vokatra any amin'ny faritra, ary nahazo loka maro avy amin'ny governemanta eo an-toerana, lasa ny tena fifaninanana marika orinasa famokarana.
Madinika-format varnish + tamin'ny laser Dié-manapaka roa-in-iray fitaovana
T orinasa alemà mpanamboatra dia ny nomerika etikety amin'ny fanontam-pirinty hatramin'ny ela. Manana fitsipika henjana be sy ny zavatra takiana ho an'ny fitaovana filana. Fony tsy mbola fantany volamena tamin'ny laser, ny fitaovana rehetra dia novidina tany Eoropa, ary izy ireo te hahalala kely-format UV varnish + tamin'ny laser Dié-manapaka roa-in-iray fanao milina. Tamin'ny 2016, araka ny fepetra takiana amin'ny T orinasa, Golden Laser lasa namboarina tamin'ny laser maty fanapahana milina LC-230. Miaraka amin'ny fahamarinan-toerana sy ny kalitao avo fanapahana vokany, dia tena nankasitraka ny mpanjifa. Raha vao ny hafa marika orinasa Eoropeana nahazo ny vaovao, dia nifandray tamin'ny laser ary nandidy volamena volamena tamin'ny laser mba hamokatra nomerika Label fanapahana tamin'ny laser ary nahavita ny rafitra izay ilain'ny hihaona ny tsirairay.
M orinasa, izao tontolo izao ny mpitarika vita pirinty mpanamboatra ny marika, nividy tamin'ny laser ho faty fanapahana milina avy Italia folo taona lasa izay. Na izany aza, dia lafo eoropeanina fitaovana sy lafo vidy foana, dia efa nitady ny mitovy karazana milina fanapahana tamin'ny laser maty. Tamin'ny 2015 Labelexpo in Brussels, nandrehitra ny masony, rehefa nahita ny LC-350 tamin'ny laser maty fanapahana milina avy amin'ny Golden Laser.
Rehefa miverimberina fanaovana fitiliana sy fikarohana, izy ireo tamin'ny farany volamena nifidy tamin'ny laser LC-350D avo roa heny-loha tamin'ny laser haingam-pandeha maty fanapahana milina amin'ny vidiny tsara kokoa fampisehoana. Ny rafitra mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 120 m / min, miaraka amin'ny Rotary manasa fiantsonan'ny, horonan-taratasy-to-taratasy fandraisana sehatra sy ny rafitra fanampiny hafa mba hanatsarana ny zava-dehibe koa ny mpanjifa ny vokatra.
Akanjo sy ny kiraro Accessories orinasa
Retro-hisainana tamin'ny laser fanapahana ara-nofo
R orinasa dia izao tontolo izao lehibe indrindra damba Accessories vondrona orinasa fanodinana. Izy ireo nampahafantatra ny mihoatra ny 10 karazana volamena tamin'ny laser MARSA andian-dahatsoratra XY mpiray tamin'ny laser fanapahana milina taona maro lasa izay. Rehefa mitombo ny baiko, ny efa misy fitaovana tsy afaka hihaona ny vokatra ilaina. Volamena tamin'ny laser dia nanjary maty tamin'ny laser-fanapahana rafitra noho ny customization, izay ampiasaina indrindra indrindra ho an'ny ny taom-piotazam hisainana fitaovana.
Single / Double Side Adhesive horonam-peo
General toetra io karazana horonam-peo:
Ny tena mahazatra horonan-taratasy sakany ho 350mm
hatevin'ny avy 0.05mm ny 0.25mm
Full fanapahana sy ny oroka fanapahana tamin'ny horonan-taratasy horonam-peo